တော်ဝင်ဗျာဒိတ် - Charles နှင့် Camilla စစ်ပြန်များအား D-Day ၀ န်ဆောင်မှု၌အဘယ်ကြောင့်သွေးဆောင်ခဲ့သနည်း - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင် တော်ဝင်ဗျာဒိတ် - Charles နှင့် Camilla စစ်ပြန်များအား D-Day လုပ်ငန်းတွင်အဘယ်ကြောင့်သွေးဆောင်ခဲ့သနည်း။
မင်းသားချားလ်စ် စစ်သည်များလန်ဒန်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး ကိုကျော်ဖြတ်စဉ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းကို Cenotaph ၌ကျင်းပမည်။ " Pod ဘုရင်မကြီး Save Ann Gripper မှ ဦး ဆောင်။ Daily Mirror ၏အယ်ဒီတာ Russell Myers ကိုပုံမှန်မိတ်ဆက်သည်။ ယခုအပတ်အဖြစ်အပျက်တွင် Ms. Gripper မှဗြိတိန်တော်ဝင်တော် ၀ င်တော်ဝင်အောက်မေ့မှုဌာနအကြီးအကဲကက်သရင်းဒေးဗစ်စ်နှင့်ချားလ်စ်အကြောင်းပြောပြရန်ထိမိသည့်ဇာတ်လမ်းရှိသူ Camilla .
မစ္စဒေးဗစ်က“ ဇွန်လမှာ D-Day အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေကျင်းပတဲ့ 75e နှစ်ပတ်လည်နေ့ငါ Bayeux မှာနေခွင့်ရခဲ့တယ်။
"ဒီဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက်ငါတို့စစ်ပြန်များအတွက်ကြီးမားတဲ့ marquee ရှိခဲ့ပါတယ်။
"Wales မင်းသားနှင့် Cornwall of Duchess ကဒီအခန်းထဲမှာဝါရင့်တစ် ဦး ချင်းစီနဲ့အတူကုန်ဆုံးချိန်ကကျွန်မကိုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားစေခဲ့ပါတယ်။
ဝေလနယ်၏မင်းသားနှင့် Cornwall ၏ Duchess (ရုပ်ပုံ: Getty)
ဇွန်လတွင် D-Day အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွင် Charles နှင့် Camilla (ရုပ်ပုံ: Getty)
ပြီးတော့သူတို့ကလူတစ်ယောက်စီကိုပေးတာ၊ ငါထင်တယ် မင်းသားကဲ့သို့၎င်း၊ အထူးသဖြင့်ခဏသာစောင့်၏။
သူတို့ဟာဒီတဲမှာ ၂ နာရီမှသုံးနာရီလောက်နေခဲ့ရတယ်။
"ဓာတ်ပုံတချို့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်အများပြည်သူအတွက်မဟုတ်ဘဲစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေအတွက်ပါ။ ဒီရပ်ကွက်ထဲကပဲ။
Read more: ဦး ထွန်းဝင်း - ချားလ်စ်ကနန်းထိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိသားစုရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေ
Duchess သည် D-Day စစ်ပြန်အာသာဂျုံး၏ပါးကိုနမ်းခဲ့သည်။ (ရုပ်ပုံ: Getty)
ဝါရင့် 94 ဂျက် Mortimer နှင့်အတူမင်းသားချားလ်စ် (ရုပ်ပုံ: Getty)
Wales နှင့် Duches မင်းသားသည်ယခုအပတ် London မြို့ရှိ Cornwall သို့သွားရောက်လည်ပတ်သည် (ရုပ်ပုံ: Getty)
မစ္စ Gripper က“ ငါတို့မကြာခင် Cornwall ရဲ့ Duchess of Duchess ဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုပြောဖို့လိုတယ်။ ဆရာဝန်ကသူမရဲ့ရင်ဘတ်မှာရောဂါကူးစက်မှုကြောင့်အိမ်မှာနေဖို့အကြံပေးတယ်။ "
ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက် - ချားလ်စ်ဟာ Camilla နဲ့လက်ထပ်ဖို့ဒီလောက်ကြာခဲ့ပြီ [ဖျောပွ]
တော်ဝင်ဗျာဒိတ် - ဝီလျံနှင့်ကိတ်တို့၏ပုံသဏ္Charlesာန်အားချားလ်စ်မည်သို့ပေးသည်ကိုဖော်ပြခြင်း [Insight]
အဘယ်ကြောင့် Cornwall ၏ Duchess ၏အခြားတော်ဝင်ခေါင်းစဉ်များနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည် [ဖျောပွ]
Camilla သည်ယခုအပတ် Swiss Cottage တွင်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်ကိုသောက်နေသည် (ရုပ်ပုံ: Getty)
Camilla သည်ယခုအပတ်တွင် Duke နှင့် Sussex of Duchess of join မနေနိုင်တော့ပါ (ရုပ်ပုံ: Getty)
မနေ့ကတက်ရောက်ခဲ့သည့် Westmins ter Abbey တွင်သတိရအောက်မေ့ပွဲရုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုလွဲချော်ခဲ့ရသည် မင်းသားဟယ်ရီ et Meghan Markle .
မစ္စ Gripper ကဆက်လက်ပြောကြားသည်မှာဤဖြစ်ရပ်များသည်တော်ဝင်မိသားစုများ၏တာဝန်ဝတ္တရားအမှန်ဖြစ်သည်။
Guy Marchand: သူ၏ "သူတော်ကောင်းတရားကလေးနှစ်ယောက်" နှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏ရှားပါးသောယုံကြည်မှုများ